Zvakakosha mafomati ekushambadzira ewebhusaiti yekambani | ECommerce nhau
Zvakakosha mafomati ekushambadzira ewebhusaiti yekambani
Claudi casals | | eCommerce, Kutengeswa kweIndaneti
Makambani ese agara achida kushambadzira kusimudzira zvigadzirwa zvavo kana masevhisi. Iyo Internet yakashanda senzira yekufambisa kupihwa kwekushambadzira kwedu kune vatatu mapato, kana zvinopesana, izvo zvinoshambadzwa pawebhusaiti yedu. Pakutanga, yaigara ichionekwa nenzira yemabheni, asi kushanda kwayo kwakaita kuti vakure. Mafomati anowanikwa nhasi akawanda zvekuti zvakajairika uye zvakajairika kurasikirwa zvishoma nezvekuti ndeupi anogona kubudirira kwazvo.
Nechikonzero ichocho, isu ticha taura nezve akasiyana uye makuru ekushambadzira mafomati iyo yatinogona kuwana kune yedu webhusaiti. Kuongorora kupfupi kweumwe neumwe wavo kufumura zvakanakira nekuipira kweumwe neumwe. Neiyi nzira, iwe pachako unozogona kutora yako pachako mhedziso, uye pane iyo yaunofunga kuti ndiyo yakakodzera kwazvo.
1 Kuba peji
6 Pre-roll, yepakati-roll uye post-roll
7 Mupfumi Media
8 Mhedziso pamusoro pekushambadzira mafomati pawebhu
Parizvino, iyi mhando yemabhena iri imwe yemafomati anonyanya kudiwa chii chirikuita. Kufanana nemamwe mafomati, yakagadziridzwa zvakare, ichipa mhinduro nemimwe mikana pamwe nekugadzira. Kubatsira kwaro kukuru ndekwekuti chero neayo mamwe maumbirwo uye saizi vanogona kushambadzwa pane angangoita ese mapeji ewebhu. Kazhinji kuoneka pamativi yemapeji, pasina kukanganisa izvo zviri pavari. Saka zvakadzikira zvakanyanya kupfuura mamwe mafomati.
Ivo vanowanzo kuve akaenzana uye akaenzana, uye kune akasiyana marudzi emapeji ekuba zvinoenderana nemafomati avanoda kubatanidza. Pakati peanonyanya kushandiswa uye anowanzo gamuchirwa neakasiyana webhu anotsigira, isu tinowana zvinotevera:
Pakati Pakati Rectangle Peji Robo. Saizi yayo ndeye 300 x 250 pixels, ine huremu hwe30kb.
Yakaenzana Peji Kubira. Iyo 300 x 300 pixel square. Zvakare nehuremu hwe30kb.
Splitscreen peji rekuba. Yakareba saizi, 300 x 600 pixels. Iine huremu hwakaenzana hwe30kb.
Imwe yeiyi mavhezheni anogona zvakare kuwanikwa mune inowanza fomu.
Rudzi urwu rwebhanhire runowanikwa mune yepakati maitiro evashandisi. Iyo inonziwo keteni, inotora iyo peji rese kwarinowanikwa. Inoonekwa kwenguva yakati, kunyangwe ichigona zvakare kuve nemaburi ekuvharwa kwayo. Semuenzaniso, kana munhu akada kuisa Actualidadecommerce kubva kuGoogle, vobaya pane iyi link, uye vasati vapinda vaizoona iyo yose banner inogara pachiratidziro, chingave chirevo chepakati.
Kushandiswa kwaro kunowanzoenda pasi, nekuti ndizvo inokuvadza zvakanyanya kune vashandisi. Izvo hazvisi zvekufarira chero munhu, kushanyira peji kana chikamu kunyangwe mukati meiyo webhusaiti, uye nekuona kushambadza chaipo kubva pabheti inovanza zvese zvirimo. Nei ichiri kushandiswa? Nekuti chijana inogadzira sosi huru yemari. Kumanikidza mushandisi kuti apfuure nemureza kunogadzira fungidziro.
Pakutanga, apo nguva dzekuburitsa padandemutande dzainonoka, ivo vachiri kupa varaidzo kumushandisi vakamirira kuti peji rizare zvizere. Nekudaro, izvozvi zvakashata zvinokanganisa ruzivo rwevashandisi (UX). Iyo inodzivirira kufamba, uye inodzivirira kumhanya uye kuyerera kunoitwa.
Zvakafanana nemashandiro anoita iyo interstitial, asi Inoonekwa mukati mewebhu, kana uchiita zvimwe zviito, uye nemadiki mashoma. Semuenzaniso, nekutenderedza mbeva pamusoro peshoko, mufananidzo, kana kunyangwe mune imwe mhando yekushambadzira.
Rudzi urwu rwekuratidzira shambadziro inoonekwawo seyenhema Nenzira inogona kuvharira uye kutadzisa zviri mukati mewebhu. Pop-ups, inonziwo "pop-up windows«, Ndeye inoshanda kushambadzira, asi zvakasiyana gadzira kurambwa nevashandisi. Ndiyo tsananguro yekuti nei mamwe mabhurawuza achitanga kupa mukana wekuvhara aya windows nekuda kwekutsamwa kwavo.
Iyo bhiribhodhi ndeye 970 x 250 pixel mega banner. Iyo hupamhi hwakaenzana neiyo inowanzo tungamira mawebhusaiti, asi iine imwe yekuwedzera iyo inoita kuti iwedzere kuoneka. Nezve vashandisi, inokwanisa kuve nemhedzisiro yakakura, uye basa rayo harisi rakawandisa kutsvaga iko kubaya asi kuti riite fungidziro uye mukana wekuti mushandisi anofambidzana nebhena.
Icho chiri pamusoro gadzirisa musoro, kumashure uye / kana mativi epeji aine iwo iwo dingindira yemushandirapamwe wekushambadzira. Inogona kusanganisira vhidhiyo mumusoro kana fomati ine simba, uye kunyangwe mafomati ekutanga. Ivo vanoshanda kwazvo, pasina kuvhiringidza, uye havawanzo kukanganisa maitiro emushandisi. Izvo zviri nyore kutakura (kune vashandisi).
Pre-roll, yepakati-roll uye post-roll
Ndidzo kushambadza kunoonekwa pakutanga kwevhidhiyo, pakati, kana kumagumo, zvichiteerana. Misiyano yavo ndeinotevera:
Pre-rwakapetwa: Ivo vanoonekwa pakutanga kwemavhidhiyo. Zvichienderana nemushandirapamwe, inogona kuoneka mune vhidhiyo fomu kana dzimwe nguva mumufananidzo. Zvimwe zvinofanirwa kuburitswazve zvizere, chero bedzi zvisina kureba, uye kana zvakareba zvinowanzoisa bhatani rekusvetuka, «skip ad».
Mid-rwakapetwa: Ndivo ma ads anowanikwa pakati pevhidhiyo. Ivo vanowanzo mune iwo marefu mavhidhiyo anopfuura anopfuura gumi maminetsi. Mid-rolls ingave iri yepedyo chinhu kushambadziro yeterevhizheni.
Post roll: Iwo ma ads ayo anozoonekwa pakupedzisira kwevhidhiyo. Kusiyana nevamwe, ivo vanofanirwa kutora yakawanda yevashandisi kutarisisa nekupa yakawedzera kukosha, kunyanya nekuti izvo zvemukati mevhidhiyo zvapera.
Kusiyana neshambadziro yekuratidzira yechinyakare, midhiya yakapfuma iri Ads ane epamberi maficha senge ruzha, mavhidhiyo, kana zvinhu izvo zvinokwezva kutarisisa kwevashandisi. Uye zvakare, mukana wavanopa ndeyekuwana iwo akasiyana metric pane erudzi rwekupindirana kwavakaita nevashandisi. Kubva panguva dzawakadzvanywa, yakawedzera, vhidhiyo yacho yaonekwa zvizere, nezvimwe. Kupa ruzivo nezve budiriro yemushandirapamwe.
Mhando iyi yemabhena zvinowanzoitwa muHTML5. Iyo ndeimwe yemhando dzakabudirira kwazvo, nekuti zvinoenderana nezvidzidzo, vashandisi vanowanzoita kanokwana kana zvakapetwa pane izvi kupfuura mabhena echinyakare. Uye kana vhidhiyo yacho ichinyatsogadzira uye ichidonhedza maziso, mwero unogona kuwedzera kusvika kungana 4.
Mhedziso pamusoro pekushambadzira mafomati pawebhu
Kushambadzira mafomati icharamba ichikura sezvo tekinoroji uye mushandisi zvinoda shanduko. Mazhinji eaya akatsanangurwa pamusoro apa aisavapo pakutanga, izvo zviri nyore kufungidzira kuti mafomati matsva acharamba achiuya. Sekunakidzwa kutsva, zvido uye nzira dzekudyidzana pamhepo zvinobuda, isu tinofanirwa kuve nehanya kuti kushambadzira kunoramba kuri muchimiro.
Zvimwe zveizvo nhasi zvinonzi "zvakanaka" kana "zvishoma zvinokanganisa" zvinogona kukanganiswa nekushambadzira kunatsiridza izvo zvinogona kuita kuti zvisafadze, kana kuti zvinokosheswa nekufinhwa. Kuchengetedza yakanaka yekushambadzira fomati ichakubatsira iwe kuchengetedza yakanaka nhanho yekugutsikana kwevashandisi, uye nekudaro, iwo traffic haina kudzikira nekuda kwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zvakakosha mafomati ekushambadzira ewebhusaiti yekambani
Nhanho nhanho kugadzira eCommerce
Makiyi ekuvandudza ruzivo rwevashandisi pane nhare mbozha